बीएस ६ सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटर नेपाली बजारमा - Aathikbazarnews.com बीएस ६ सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटर नेपाली बजारमा -
सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा बितरक भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले बीएस ६ प्रविधिको सुजुकी एक्सेस स्कुटर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । निषेधाज्ञाकै समयमा नेपाल प्रवेश गरेको उक्त स्कुटर सुजुकीको बहुप्रतीक्षित स्कुटर हो ।
यो भारतीय बजारमा टप ३ मा रहन सफल स्कुटर मध्येमा पर्दछ । सुजकी एक्सेस स्कुटर विगतमा नेपालमा पनि धेरै मध्यम वर्गका बीच र व्यावसायिक प्रयोजनमा निकै रुचाइएको स्कुटरमा पर्छ । एक्सेस स्कुटरमा आगाडी ग्यास सिलिन्डर अटाउने, फराकिलो सिट तथा आराम्दाइ यात्रा हुनुका साथै यसमा अगाडिको भागमा स्टिलको कभर समेत रहेको छ । यसले गर्दा यो दैनिक प्रयोजनका लागि निकै नै उपयोगी रहेको छ भने यसको मर्मत खर्च पनि अरु भन्दा कम आउने यसका उपभोक्ताहरुको बुझाई छ ।
हाल नेपालमा भित्रिएको सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटरमा फोर स्ट्रोक सिंगल सिलिन्डर एयरकुल्ड जडित इन्जिन प्रयोग गरिएको छ । नयाँ परिमार्जित एक्सेस १२५ स्कुटरमा भारत स्टेज ६ अर्थात बीएस ६ प्रविधि जडान गरिएको छ भने एफआई प्रविधि समेत रहेको हुँदा उत्कृष्ट माइलेज आउने आकलन गर्न सकिन्छ ।
२ भल्वयुक्त इन्जिन प्रयोग भएको यस स्कुटरमा इन्जिनले ६७५० आरपीएममा ८.७ पीएस पावर र ५५०० आरपीएममा १० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । एलईडी हेडल्याम्प तथा बाहिरबाटै पेट्रोल भर्न सकिने सुबिधाले यसको सजावटमा समेत आकर्षण थपेको छ । एस मा सुजुकी स्टार्ट सिस्टम प्रयोग गरियेको छ र किक स्टार्ट दुबै व्यवस्था रहेको सो स्कुटरमा २२ लिटर बराबरको स्टोरेज राखिएको छ भने मोबाइल चार्जिङ प्वाइन्ट समेत जडान गरिएको छ । दुबै चक्कामा अलोय ह्विल प्रयोग गरिएको सो स्कुटरको जम्मा तौल १०३ किलोग्राम रहेको छ ।
१६० mm को ग्राउण्ड Clearance भएको हुँदा, यो सेग्मेन्ट मै उत्कृष्ट प्रोडोक्ट गनिन्छ । पूर्ण डिजिटल मिटर को साथमा क्लासिक स्टाईल, ईन्जिन diagnosis, battery diagnosis सहित ट्रिप मिटर तीन कलरमा उपलब्ध छन् ।
सेतो, निलो, खैरो र कालो गरी चार रङमा उपलब्ध सुजुकी एक्सेस स्कुटरमा बढि रुकचाइएको रङ भने निलो मानिएको छ ।
मोटरहेडको टेकन आर २५० सार्वजनिक, कति छ मूल्य ?
टीभीएसको भृकुटीमण्डपमा दसैं एक्सचेन्ज मेला, पुरानो वाइकको मूल्यांकन वाहिर भन्दा १० हजार बढी
आइएमई अटोमोटिभ्सले बढायो एस्कर्ट्सको मार्केट, बेस्ट पर्फमिङ व्यापार अवार्डद्वार सम्मानित
१ सय २५ सीसीदेखी हजार सीसीसम्मको मोटरसाइकलको मूल्य बढ्यो, कुनको कति बढ्यो कर
अपाचे आरटीआर २०० फोरभी बजारमा, बीएस सिक्स इन्जिन, राइडिङ मोडलगायत पावरफुल फिचर
हुण्डाईको चाडपर्व योजनाः ३ लाखसम्म नगद छुट, बक्परमा आई २०
कोभिड महामारीले डिजिटलाइजेसनमा लग्यो, जागिर खोज्ने होइन जागिर दिनेको संख्या बढायोः अनिल शाह
अवसरको सदुपयोग गर्न सक्लान् प्रम ओलीले
बीमा समितिको अध्यक्षमा दावेदारहरुको चर्को दौडधुपः चापागाई, सिवाकोटी र निरौलाबीच कसको पल्ला भारी ?
माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड सेवा रुपन्देहिको योगिकुटी हाटबजारमा